Huawei akaedza software yekuchenjera yekuziva boka reMuslim | Linux Vakapindwa muropa
Huawei, pamwe neMegvii, imwe yemakambani makuru eChina ekuchenjera (AI), yakaedza chimiro chekuzivikanwa kwechiso iyo inogona kushandiswa kuona nhengo dzeboka reMuslim vashoma uye tumira yambiro kuvakuru.
Dzinza reUyghur vashoma iboka reMuslim kudzvinyirirwa, kazhinji kunongedzerwa nehurumende yeChinese, iyo inogara kunyanya mudunhu rekumadokero kweXinjiang.
Gwaro repamutemo ra2018 rakagadzirwa nemakambani maviri eChinese rinoratidza izvo Huawei yakaedza Megvii software pane yayo vhidhiyo gore zvigadzirwa. Gwaro iri rakawanikwa neIPVM, yekuAmerican kambani yekutsvaga inonyanya kuongorora vhidhiyo yekuongorora.
IPVM yakagovana zvavakawana neWashington Post, yaive yekutanga kuburitsa zvirimo neChipiri.
Muedzo wakaitwa kuti uone kana iyo Huawei Hardware ichienderana ine Megvii's kumeso kuzivikanwa software, maererano neIPVM mushumo. Huawei akapa iyo Hardware, senge kamera, maseva, uye gore komputa zvivakwa, nepo Megvii ichipa software. Sechikamu chebvunzo, chiitiko chinonzi "Uyghur alarm" chakaedzwa. Chimwe chiitiko che software chakashandiswa kuona 'dzinza' sechikamu cheayo 'echiso hunhu hunongororwa'.
Muna 2018, gwaro reUnited Nations rakaratidza kunetsekana kuti vanhu vanopfuura miriyoni vakabatwa munzvimbo "dzinonzi dzinopesana nekunyanyisa uye kuti mamwe mamirioni maviri akamanikidzwa kuzvipira" kumisasa yekudzidzisazve. Kuitira zvematongerwo enyika nehunhu kudzidziswa 'kuXinjiang .
Muna Chikumi gore rino, UN yakadzokorora kushushikana kwayo nezve "kudzvanywa pamwe kwevanhu, kunyanya vezvitendero nemadzinza mashoma, muXinjiang neTibet."
Huawei naMegvii mapiyona ehunyanzvi anonyanya kukosha eChina, uye zviremera zveChinese zvakavaona sevatungamiriri mumushandirapamwe wenyika kuti vasvike kumberi mukusimudzira njere dzekugadzira, maererano neWashington Post. Asi makambani ane mabhiriyoni emadhora aya akarohwa zvakaipisisa nevakuru veUS, avo vanoti vanokanganisa kuchengetedzeka kweAmerica kana kuti vakapa hutongi hwehutsinye hweChina.
Makambani masere eChina, kusanganisira Megvii, vakatemerwa zvirango neUnited States Department of Commerce gore rapfuura nekupindira kwake "kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa mukuitwa kwemushandirapamwe wekudzvinyirira, kuvharira vanhu zvisina tsarukano uye kuongorora kwepamusoro muChina" vachipesana neUighurs nemamwe mapoka madiki evaMuslim.
Hurumende yeUS. yatorawo masanctions kuHuawei nemakambani akabatana, inorambidza kuburitsa tekinoroji yeUS kukambani iyi uye kumanikidza dzimwe nyika kuti dzibvise masisitimu avo kubva kunharembozha yavo.
Sekureva kweshumo, Huawei neMegvii vakazivisa matatu masystem ekuongorora vachishandisa tekinoroji kubva kumakambani maviri mumakore maviri apfuura. IWashington Post haina kukwanisa kutsigira nekukurumidza kana iyo "Uyghur alarm" system yakaedzwa muna 2018 yaive imwe yevatatu vari kutengeswa parizvino.
IPVM inoti basa senge 'Uyghur alarm' inogona kushandiswa kuratidza nhengo yeboka revashoma kuzviremera.
"Masystem akaita seMegvii akavakirwa muhurongwa hwaHuawei kuitira kuti Megvii ibudise ruzivo uye maalarm vozoatumira kuhurongwa hwaHuawei kuitira kuti vatungamiriri (semapurisa) vagone kuongorora nekuvapindura," akadaro. Mutungamiri weIPVM, John Honovich akadaro mune yekutaurirana neemail apo achitsanangura kugona kuita kwe "Uyghur alarm" chimiro.
AI vaongorori vanotya kuti rimwe zuva software kuziva rudzi inogona kutora kunze kwemiganhu yenyika yekutarisa. Mapurisa nevakuru vehurumende veUnited States vakaratidza kufarira kuri kukura software sechinhu chekuferefeta, asi masisitimu aya akaunza runyararo rwevanhu kune zvingangoita kusarongeka uye zvisizvo, uye mamwe maguta nemapurisa Vakasarudza kurambidza iyi tekinoroji zvachose.
Nekudaro, aya matekinoroji anogona kuwana musika pakati pehutongi hwepasi rose, kumwe kunhu pakati peChinese neAmerica simba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei akaedza software yekuchenjera yekuziva boka reMuslim
"Pinda" mumisasa yekudzidzisazve "yezvematongerwo enyika uye yetsika indoctrination" muXinjiang. "
Ikozvino zvinoitika kuti kuisa matsotsi mumajeri anonyatso shanda kuvadzosera munharaunda kuburikidza nekudzidziswazve maitiro avo ematsotsi uye kuzvidza kwavo nzanga nevamwe uye nekudzidza kutendeseka kutendeseka "indoctrinating" ... Yedu yakanakisa "yedemokrasi" majeri uko Mbavha dzinopinda uye dzinosiya dzashanduka kuva mhondi, asi teerera shamwari yangu, pasina "kudzidzisa" uye ivo vanobvumidzwa kuenderera vakasununguka mukati mejeri nema shenanigans avo nemashenanigans ...
"Kutora chikamu" Kukanganiswa Kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa mukuzadzikiswa kweMushandirapamwe weVadzvinyiriri, Kuvharirwa kweMisa Zvisingaite uye Kuongorora Kwakanyanya muChina "
USA dixit, sezvo ichiuraya vamwe vana makumi maviri mu "mabhomba ekubatsira" uye makumi mashanu ekupemha vanofa vachirwara muLA uye NY nekuti hurumende inovanyima kurapwa kana kuurawa nemapurisa ayo anotanga kupfura obvunza mibvunzo gare gare. ???
Asi chinoshungurudza ndechekuti China iri kunetsekana, pamwe zvakanyanyisa, hapana munhu akakwana, nemagandanga ari kuyedza kupinza nyika kuburikidza nenharaunda dzevaMuslim. Vakashata sei maChinese, vasingade 14-M kana Bataclán kana kushungurudzwa muBarcelona kana Munich, nezvimwe, munyika mavo ... Islamophobic uye vasingashiviriri, ndizvo zviri vakuru veChinese kudzora huwandu hwevaMuslim .. .
Zvakanaka ndinovimba system yako inoshanda uye hurumende dzedu dzinozvitenga nekukurumidza kudzivirira maIslam kubva pakupararira kutenderera pasirese kuuraya vasina mhaka. Bravo yeChina! Uye kuti iyo USA yakaisa hunyengeri hwayo zvakanaka kune ortho, kuti havakwanise kupa zvidzidzo zvehunhu kune chero munhu.
NetBeans12.2 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo